Onye isi oche ozi
Iji mee ememme Nationalbọchị Mba na Mid-mgbụsị akwụkwọ Ememme, a na-enwe obere nzukọ egwuregwu na Shuangyang Medical. Ndị na-agba ọsọ na-anọchi anya ngalaba dị iche iche: Ngalaba nchịkwa, Ngalaba Ego, Ngalaba Departmentzụta, Ngalaba Teknụzụ, Pro ...
Ihe ngosi 2019 COA
A na-eme nzukọ 21st Orthopedics Academic Conference na 14th COA Academic Conference of Chinese Medical Association na National Convention and Exhibition Center (Shanghai) site na November 14 ruo 17, 2019. Nke a bụ oge mbụ na COA (Chinese Orthope .. .
Ngwá Ọrụ Nkà
A ga - eme asọmpi nka na Septemba 29th na Shuangyang Medical maka emume ncheta afọ iri asaa nke ntọala nke Ndị mmadụ Republic of China. Were ọrụ dị ka ọrụ ma kwanyere ọrụ nke anyị ùgwù n'agbanyeghị ọrụ mmepụta anyị na-arụ, ma na-arụ ọrụ c ...
Ihe ngosi 2018 COA
A na-eme ogbako ogbako orthopedic nke iri abụọ na ogbako agụmakwụkwọ 13 nke COA nke Medicallọ Ọrụ Ahụike China na Xiamen site na November 21 ruo 24, 2018. Na-atụ anya izute gị n'ụlọ ntu Shuangyang Medical. ...
Ihe ngosi 2017 COA
The 19th orthopedic agụmakwụkwọ ogbako nke Chinese Medical Association na nke 12 Chinese Orthopedic Association (COA) ẹkenịmde ke Zhuhai, Guangdong Province si November 15 na 18, 2017. Na-atụ anya izute gị na Shuangyang Medical ụlọ ndò. ...
Kedu ka ọkpụkpụ gbajiri esi agwọ?
Ọkpụkpụ gwọọ site na-eme cartilage ka nwa oge nkwụnye oghere kere site ezumike. Nke a na-ahụ dochie anya ọkpụkpụ ọhụrụ. Ọdịda, na-esochi mgbawa - ọtụtụ ndị abụghị ndị ọbịa na nke a. Ọkpụkpụ agbajiri agbaji na-egbu mgbu, mana imirikiti na-agwọ ọrịa ...
Fibula Fracture: Mgbaàmà, Ọgwụgwọ na Iweghachite
Fibula na tibia bụ ọkpụkpụ abụọ toro ogologo nke ukwu aka. Fibila, ma ọ bụ ọkpụkpụ nwa ehi, bụ obere ọkpụkpụ dị n'azụ ụkwụ. The tibia, ma ọ bụ shinbone, bụ ọkpụkpụ na-ebu ibu ma ọ dị n'ime ụkwụ dị ala. Fibula na tibia jikọtara ọnụ na ...
Ihe ngosi ngosi ngosi COA 2017
A ga-eme Ngosipụta International nke International Congress of Chinese Orthopedic Association (COA) site na November 15 ruo 18. Na-atụ anya izute gị.
Nzukọ Kwa Afọ nke 2016
Ahụike Shuangyang mere nri abalị nzukọ kwa afọ na Jenụwarị 18, 2017 iji kelee ndị ọrụ niile maka ịrụsi ọrụ ike ha na 2016, ma chọọ ka ndị ọrụ ibe gị nwee ahụ ike, obi ụtọ ezinụlọ na ọrụ na-aga nke ọma na onye ọ bụla n'ime afọ ọhụrụ ahụ! ...
Ihe ngosi 2016 COA
The 18th orthopedic agụmakwụkwọ ogbako na 11th COA mba agụmakwụkwọ ogbako na 2016 ẹkenịmde ke Beijing National Conference Center si November 17, 2016 ka November 20, 2016. Na-atụ anya izute gị na Shuangyang Medical ụlọ ntu. ...
Ihe ngosi 2014 COA
A ga-enwe nzukọ nzukọ mmụta Ọzụzụ Orthopedic nke iri na isii na 9th Chinese Orthopedic Association (COA) na Beijing National Conference Center site na November 20 ruo 23, 2014. Na-atụ anya izute gị n'ụlọ ntu Shuangyang. ...
Chepụta Patent Asambodo
Ejiri oru anatomic titanium ntupu na sistemu eji eme ulo oru, anyi enwetakwala asambodo patent nke 25.
Adreesị:Anglọ Shuangyang, Obodo Yangshe, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China